LEGO သည် LEGO တွင်ကျားမဘက်လိုက်မှုဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှုများကိုတုံ့ပြန်သည် Friends
13 / 10 / 2021 13 / 10 / 2021 ခရစ် Wharfe 475 Views စာ3မှတ်ချက် Friends, Lego, Lego သံအမတ်ကွန်ယက်, Lego Friends, အဆိုပါ LEGO Group
အဆိုပါ Lego အဖွဲ့၏ကံကြမ္မာကိုရှင်းလင်းခဲ့သည် Lego Friends ၎င်းသည်၎င်း၏ထုတ်ကုန်များနှင့်စျေးကွက်များမှကျား၊ မပုံဟန်များကိုဖယ်ရှားရန်ကတိပြုသည်။
ယခုအပတ်အစောပိုင်းတွင်ကုမ္ပဏီကအာမခံပေးမယ်လို့ကြေညာခဲ့တယ် Lego ထုတ်ကုန်များနှင့်အရောင်းအ ၀ ယ်များသည်ကျားမဘက်လိုက်မှုနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောပုံသဏ္န်များအားလုံးမှကင်းလွတ်သည်၊ မိန်းကလေးများသည်ကျားမပုံသဏ္န်ကိုချိုးဖျက်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့ရှိသောစစ်တမ်းတစ်ခု၏ရလဒ်များအရမိန်းကလေးများသည်ကျားမပုံသွင်းမှုပုံစံများကိုချိုးဖျက်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့ရှိသော်လည်းလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းက၎င်းတို့ကိုကျောခိုင်းထားသည်။
အတိအကျဘယ်မှာလဲ Lego Friends ၎င်းသည်မူလအားဖြင့်မိန်းကလေးများနှင့်စိတ် ၀ င်စားသောအရာအဖြစ်တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးထားသောအရာဖြစ်သည်၊ ထိုဆွေးနွေးမှုသည်မရှင်းလင်းသော်လည်း၊ Lego ယခုအခါ Group သည်၎င်း၏နာမည်အကြီးဆုံးထုတ်ကုန်လိုင်းများထဲမှတစ်ခု (သို့ဖျက်သိမ်းခြင်းကို) ဖျက်ပစ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်မှုများကိုတုံ့ပြန်ခဲ့သည်။
"Lego Friends ဘယ်မှမသွားဘူး " Lego အဖွဲ့၏ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအဖွဲ့မှတဆင့်မျှဝေသည် Lego သံအမတ်ကွန်ယက် “ နောက်နှစ် Lego Friends အစုစုတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အမျိုးအစားခွဲများတွင်ကျွန်ုပ်တို့ယနေ့ထိရှိခဲ့သည့်အထီးဆုံးသောကိန်းဂဏန်းများရှိလိမ့်မည်။ ကျား၊ မအဖြစ်၊ ငါတို့သည်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏ကွဲပြားမှုကိုတိုးပွားစေပါသည် Lego Friends ပိုအသက်ကြီးပြီးငယ်တဲ့ဇာတ်ကောင်တွေ (microdoll အပါအဝင်)
အဆိုပါ Lego Group သည်နောက်ဆက်တွဲကြေညာချက်တစ်ခုတွင်လည်းအတည်ပြုခဲ့သည် Friends မိန်းကလေးများအတွက်အမှန်တကယ်တီထွင်ခဲ့သည်၊ ၎င်းသည်မည်သည့်အခါကမျှမရည်ရွယ်ခဲ့ပါ သာ မိန်းကလေးများအတွက် - ၎င်း၏ထုပ်ပိုးမှုသည်အချို့သောကျားမပုံစံများသို့မှီခိုနေပုံရသည်။
"Lego Friendsယခုကျွန်ုပ်တို့၏ချစ်ဆုံး franchise များထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပြီးမိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားလေးများကြိုက်နှစ်သက်သည်ကို ၂၀၁၂ တွင်စတင်ခဲ့သည်ဟုကျယ်ပြန့်သောသုတေသနများပေါ် မူတည်၍ particular သည်၎င်းနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံရန်နည်းလမ်းသစ်များနှင့်ရှာဖွေနေသည် Lego Play in System” ဟုကြေညာချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
“ ap အတွက်ကွက်လပ်ကိုဖြည့်ဖို့နည်းလမ်းအဖြစ်ဖြန့်ချိခဲ့တယ်artအထူးသဖြင့်မိန်းကလေးအုပ်စုဖြစ်သောကြောင့်၎င်းကိုမိန်းကလေးများအတွက်သီးသန့်လုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ်တံဆိပ်မကပ်ခဲ့ပေ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ franchise များအားလုံးကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်ညှိယူသည် Lego Friends အားလုံးကိုပိုမိုပါဝင်နိုင်စေသောနည်းလမ်းများဖြင့် "
၂၀၂၂ ခုနှစ်အတွက်ထိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများသည်၎င်း၏အက္ခရာများကိုကျားမခွဲခြင်းဟန်ချက်ညီစေခြင်းသာဖြစ်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်မပြောင်းလဲဘဲ Friendsထုပ်ပိုးမှု (သို့) အရုပ်သေးသေးလေးများကဲ့သို့ Lego Group သည်၎င်း၏ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောအစုအဖွဲ့များတစ်လျှောက်အောင်မြင်ရန်ကြိုးစားနေပုံရသည်။
ကုမ္ပဏီ၏စေ့စပ်အဖွဲ့က“ ငါတို့ရဲ့ minifigures တွေအတွက်ကိုယ်စားပြုမှုကိုလည်းရှာနေတယ်” ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ “ လောလောဆယ်မှာအစုရှယ်ယာတွေမှာအမျိုးသား minifigures တွေပိုများလာတယ်၊ ဒါပေမယ့်ကလေးတွေကစားတဲ့ကစားစရာတွေမှာသူတို့ကိုယ်သူတို့ထင်ဟပ်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာအပြည့်အ ၀ သိတဲ့အတွက်ငါတို့ကအမျိုးသမီးဇာတ်ကောင်အရေအတွက်ကိုတိုးဖို့ကတိပြုတယ်။ ။ ”
ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ ယင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန် Lego အုပ်စု၏ကျားမဘက်လိုက်မှုအားဖယ်ရှားရန်လှုံ့ဆော်မှုအသစ် (သို့) ဒီမှာသွား ကောလဟာလစာရင်းကိုကြည့်ရန် Lego Friends 2022 ခုနှစ်တွင်ရောက်ရှိလာအစုံ။
← ထိုနေ့၏အုတ်ပုံ - Hogw နှစ် ၂၀arts
LEGO Wolverine အသစ်သည်မျက်နှာဖုံးတစ်ခုရှိကောင်းရှိလိမ့်မည် →
အပေါ်အတွေး ၁၂၂ ခုLEGO သည်၎င်း၏ကျားမဘက်လိုက်မှုဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှုများကိုတုံ့ပြန်သည် Friends လိုင်း"
ဒီလိုပုံပြင်တွေကငါ့ကိုဝမ်းနည်းစေတယ်။ ဒီရက်ပိုင်းငါတို့နေရတာဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့ကမ္ဘာကြီး ဒီအစုံတွေမှာဘာအမှားမှမရှိပါဘူး။ နောက်ထပ်အမျိုးသမီးဇာတ်ကောင်တွေကိုမိတ်ဆက်ပေးမလား။ အဘယ်ကြောင့်? များသောအားဖြင့် Lego နှင့်ကစားသောယောက်ျားလေးများဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်အများအားဖြင့်ကောင်လေးဇာတ်ကောင်များကိုသာမှီဝဲကြသည်။
ပြသာနာပြသနာ doros? ych ludzi,anie maluch dzieci ငါ့ရဲ့ doro? li kreujemy? wiat dziecka ။ Ma?edziecko nie widzi w tym problemu ။
Straszne ရယ်၊emy doro? li uwa? amy si? za bardzo m? drych ludzi, az buciorami wchodzimy w ten male? ki? wiat dziecka ။ Pozwólmy dzieciom ကဘာလဲ။ dzie? mi၊ jako doro? li ju? ludzie mogli w wolno? ci pod ?? y? ဟုတ်လား? asnych marze လား? ငါ pragnie? Przecie လား။ ka? dy ma? y
Dzieciak wie kto jest ch? opiec,akto dziewczynka ။
သူတို့ကြေငြာတဲ့အခါဒါကငါ့ရဲ့ပထမဆုံးအတွေးဘဲ၊ အဲဒါကဘာလဲ Friends? Lego ၏ပြောဆိုချက်သည်ယုံကြည်ချက်ထက်သာလွန်သည်။ “ Barbie ဆိုတာမိန်းကလေးကစားစရာမဟုတ်ဘူး” လို့ပြောသလိုပါပဲ။